आयरल्यान्डमा राइन्ट्स कोजवे, एक प्राकृतिक आश्चर्य यात्रा समाचार
हामीले केहि दिन अघि भनेका थियौं आयरल्यान्डमा अद्भुत देशहरू छन् र आज हामीसँग यी अर्को टुरिष्ट पोष्टकार्डहरू छन् जसले आगन्तुकहरूलाई आकर्षित गर्दछ: यो जाइन्ट्स कोजवे। तर यो समय आयरल्याण्डको गणतन्त्रमा होईन तर भित्र छ उत्तर आयरल्यान्ड, टापुको अंश अझै ब्रिटेन द्वारा नियन्त्रित छ।
आयरिश समुद्री तटले हामीलाई चट्टान र पानीमा सपना दिँदै छ र त्यो विशालकाय कोजवे वा हो विशालको कजवेअंग्रेजीमा उहाँको नाम। यो एक धेरै सजिलो ठाउँ हो र यदि तपाइँ पन्ना इईल जाने योजना बनाउनुहुन्छ भने तपाइँले यो जान्न रोक्न सक्नुहुन्न।
1 जाइन्ट्स कोजवे
2 विशालको कजवेमा कसरी जाने
3 जायन्ट्स कोजवे भ्रमण गर्नुहोस्
यो वर्तमान मा अवस्थित छ काउन्टी एन्ट्रिम र भूवैज्ञानिकहरूका अनुसार यो बीचको बीचमा गठन गरिएको थियो And० र million० लाख वर्ष पहिले पेलियोसेन अवधिमा। त्यसबेला त्यहाँ ज्वालामुखी गतिविधि थियो र यहाँ चट्टानहरूको उत्पत्ति भएको छ: पग्लिएको बेसाल्टको तरल पदार्थ नरम, सेतो, चाक जस्तो चट्टानको माटोमा बग्दछ र लाभाको विशाल सतहहरू गठन गर्दछ। लाभा चिसो र संकुचित र फ्रैक्चर समान प्रकारको माटो सुक्दा र भंग हुँदा।
यसैले त्यो विशेष प्रकारको जन्म भएको थियो तलको उत्तल र माथित अन्तरालसँग क्षैतिज स्तम्भहरू त्यो त ध्यान आकर्षित गर्ने छ। स्तम्भहरूको मोटाई लेभाले चिसो पारेको गतिसँग स्पष्ट रूपमा गर्नुपर्दछ। यो सबै थाहा पाउनु भन्दा पहिले यसलाई रोक्नु वा तिनीहरूमा हिंड्नु भन्दा पहिले हामी तिनीहरूलाई अझ कदर गर्नेछौं।
विशालको कजवेमा कसरी जाने
तपाईं पाउन सक्नुहुन्छ कार वा बस द्वारा। दुबै Calzada र हालको आगन्तुक केन्द्र B147 रोडमा अवस्थित छन् बुशमिल्स गाउँबाट तीन किलोमिटर, कोलरेनबाट ११ माईल र बल्याकासलबाट १२। त्यहाँ पार्किंग स्थलहरू छन् ताकि तपाईं आफ्नो कार छोड्न सक्नुहुन्छ।
साथै, Calzada र Bushmills बीच बस सेवा छ जुन मार्च र अक्टुबर बीचको नियमित आधारमा सञ्चालन हुन्छ र २० मिनेट मात्र लिन्छ। यदि तपाइँ छनौट गर्न जाँदै हुनुहुन्छ tren तपाईंले थाहा पाउनुपर्दछ कि तपाईं यसलाई बेलफास्ट वा लन्डोन्डरीमा लिन सक्नुहुनेछ तर तपाईं कोलरेनबाट पछाडि जानुपर्दछ र त्यसपछि बस मार्फत जडान गर्नुपर्छ (अलस्टरबस सेवा १172२)। यदि तपाईंको हो भने पैदल यात्रा वा साइकल यात्रा त्यहाँ पनि गर्न महान मार्गहरू छन्।
La कोजवे कोस्ट वेउदाहरण को लागी, सुन्दर तटवर्ती को मील यात्रा।
जायन्ट्स कोजवे भ्रमण गर्नुहोस्
हाल मूल्य छ प्रति वयस्क £ 10 (अनलाइन मूल्य) मानक मूल्य त्यहाँ £ ११.11० छ त्यसैले यदि तपाईं केहि बचत गर्न चाहानुहुन्छ अनलाइन किनमेल राम्रो छ। ठाउँ जनवरीमा बिहान9देखि साँझ5सम्म खुल्छ, फेब्रुअरी र मार्च एक घण्टा पछि बन्द हुन्छ, अप्रिल, मे र जून साँझ 7, जुलाई र अगस्त9बजे, सेप्टेम्बर फेरि ses बजे बन्द हुन्छ, अक्टुबर साँझ7र नोभेम्बरमा बन्द हुन्छ। र डिसेम्बर साँझ6बजे बन्द हुन्छ।
टिकटले आगन्तुक केन्द्रमा पहुँच सुनिश्चित गर्दछ, बाह्य अडियो गाइड र अभिमुखीकरण पम्प्लेटको उपयोग, तर भिजिटर सेन्टर र काजवे बीचको बसमा अतिरिक्त लागत छ। यद्यपि त्यहाँ पुग्न दुई तरिकाहरू छन् तट र यसको विशाल कजवेमा: एउटा सडकबाट सीधा छ र अर्को पैदल छ.
सडकबाट, जहाँ बसले तपाईंलाई छोड्छ, त्यहाँ एक किलोमिटरभन्दा कम टाढा हुन्छ र यदि तपाईंसँग परिपत्र पैदल यात्रा छ जुन चट्टानहरूको मार्ग पछ्याउँदछ। गोठालोको चरणहरू र फिर्ता सडकमा जुन kilometers किलोमिटर लामो छ।
सब भन्दा प्रसिद्ध पोष्टकार्ड, स्तम्भहरूको त्यो पर्खाल जुन अंगको पाइपहरू जस्तो देखिन्छ, जुन अंगको रूपमा राम्ररी परिचित छ, तिनीहरू तल्लो बाटोमा पुगेका छन् जुन दुबै रोडबाट र शेफर्डको स्टेप्सबाट लिइएको छ। यस मार्गको साथ तपाईंले विशाल आँखा देख्नुहुनेछ, राता रातो प्वालहरू, चट्टानमा फलामले बनेको। मार्ग साँघुरो छ तर साढे तीन किलोमिटर दौडन्छ।
त्यहाँ कल पनि छ रनकर सर्किट, पथ जो चट्टानको माथिको साथ मार्ग अनुसरण गर्दछ, कोजवे होटेल र रनकर हाउसमा जान्छ। दृश्यहरू उत्कृष्ट छन्, तपाई डोनेगल र पोर्ट्रस पनि देख्नुहुन्छ, र ड्राइभले तपाईंलाई भिजिटर सेन्टर गेटहरूमा ड्रप गर्दछ। सडक पहिले प्रशस्त छ तर पछि यो घाँस वा फोहोरले बनेको हुन्छ र4किलोमिटर यात्रा गर्दछ।
La डन्सेभरिक क्यासल ट्रेल यो यहाँ चारै तिरको सम्भावित पैदल यात्रा हो। तपाईं यसलाई ठूलो भिजिटोर सेन्टर पार्कि lots लोटको पछाडि सानो पार्किंगको अन्तमा लिनुहुन्छ। यहाँ कोजवे कोस्ट ट्रेलले पुरानो ट्रामवे पछ्याउँदछ जुन १ 1949। Until सम्म चलेको थियो। यस मार्गले फलामको पूल पार गर्छ र पहाडमा पोर्टबलिन्ट्रामा पुग्छ कुल दुई किलोमिटरको लागि।
अन्ततः त्यहाँ छ Portallintrae पुरानो ट्राम ट्रेल आफैमा एउटा चट्टानको माथिको सबैभन्दा लामो ट्रेल्स। यो संकुचित र फिसलन छ तर प्रदान गरिएको हेराइहरू हेर्न लायकका छन्। यो डन्सेभरिक महलमा आइपुग्छ र तपाईंलाई भिजिटर सेन्टरको खुट्टामा खसाल्छ। जम्मा १ 13 किलोमिटर। यी सबै हिंडहरू छन् जुन विशालकाय काजवेको तटीय क्षेत्रले प्रस्ताव गर्दछ।
महत्त्वपूर्ण कुरा, तपाईंले लिने मार्गहरू जुनसुकै लिनुहुन्छ पनि, त्यो यो हो कि तपाईंलाई यो जान्न रोक्नुहुन्न सब भन्दा लोकप्रिय रक संरचनाहरू: हार्प, द अर्गन, ऊँटको हम्प र चिम्मे स्ट्याक्स।
यसको भागको लागि पर्यटक केन्द्र पार्क को मुटु हो: काँचको पर्खाल र बेसाल्ट स्तम्भहरूको संरचना, कुशल खपत र आधुनिक डिजाइनको। भित्र र छतबाट धेरै प्रदर्शनी कोठाहरू छन्, घाँसले ढाकिएको, तपाईंसँग एक छ ºº०º विशालको कजवेको दृश्य।
यो स्थान हो जहाँ तपाईं दुबै वास्तविकता र यस सडकको मिथ्या सुन्नुहुनेछ: भौगोलिक वास्तविकता र दुई दिग्गजहरूको बारेमा मिथ्या: राम्रो Finn MacCool र Benandonner, स्कटल्याण्ड बाट तपाइँको खराब छिमेकी। एक राम्रो दिन तिनीहरूले सेना भेट्न र नाप्न समुद्र पार गर्न सक्ने सडक निर्माण गर्ने निर्णय गरे।
फिनले आफ्नो भाग गर्‍यो तर यो कडा थियो कि ऊ निदायो। उनकी श्रीमतीले उनलाई फेला पारे तर उनलाई ब्यूँझनु अघि उनले बेनान्डोनर आइरहेको सुने र उनलाई वास्तवमै ठूलो देखे ताकि उनले आफ्नो श्रीमानलाई केप र टोपीमा लुकाए। स्कट्सम्यानले उनलाई बोलाए तर श्रीमती, धेरै चतुर, उनलाई उसको आवाज कम गर्न भन्यो वा ऊ सुतिरहेको बच्चालाई जगाउँला। यसैले, बेनान्डोनरले सोचे कि यदि बच्चा ठूलो छ भने, बुबा वास्तवमै विशाल हुनुपर्दछ ... उसले के गरे? किनकि उहाँ फेरि स्कटल्याण्डमा लाग्नुभयो र उहाँको पछिल्ला कारणहरू नष्ट गर्नुभयो।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » यात्रा » के हेर्ने » आयरल्यान्डमा विशाल आश्चर्यकोप, अद्भुत आश्चर्य